अन्तर्राष्ट्रिय – Kantipurlink.com
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट निस्कासित घोषणा गरिएका विनय गुरुङले आफूलाई मार्न नेपालबाट ‘सार्पसुटर’ ल्याएको दाबी गरेका छन् । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष बिमल गुरुङले तामाङ र अनित थापालाई दलबाट निकालिएको घोषणा गरेका थिए । गोजमुमो केन्द्रिय समितिले आफूहरुलाई पार्टीबाट बहिष्कार गर्ने लिएको निर्णयलाई विनय तामाङले स्वीकारनै गरेका छैनन् । अझै पनि उनले आफूलाई गोजमुमो केन्द्रिय समितिका मुख्य समन्वयकनै रहेको दावी गरेकाे...	Read More
अन्तर्राष्ट्रिय Leaveacomment
दार्जिलिङ । पाहाडकी रानीकाे उपमा पाएकाे दार्जिलिङ बन्द भएको आज ८० दिन भएको छ । झण्डै तीनमहिना लामो बन्दले दार्जिलिङको अवस्था अत्यन्तै कष्टकर बन्दै गएको छ । खाद्यान्न अभावले मानिसहरु भोकै मर्ने अवस्था आएको छ भने शैक्षिक संस्था, उद्योग कलकारखाना, यातायात लगायत सबै ठप्प हुँदा जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ । दार्जिलिङ आन्दोलन र लगातारको बन्दले सर्वसाधारणको अवस्था दयनिय हुँदा...	Read More
भारतको बिहार राज्यका एक जना मन्त्रीले हालै देशमा आएका बाढीका लागि मुसा जिम्मेवार रहेको बताएका छन्। जलश्रोत मन्त्री राजीव रञ्जनले तटबन्ध नजिक बसोबास गरिरहेका मानिसले भण्डारण गरेका अन्नतर्फ मुसा आकर्षित भएको बताए। उनले तटबन्धहरुमा मुसाले प्वाल पारेको र त्यसलाई कमजोर बनाएको अनि उक्त प्वालबाटै बाढी गाउँमा पसेको धारणा राखे। हालैका बाढीका कारण भारतमा ५०० जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ...	Read More
उत्तर कोरियाले अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र मार्फत हान्न सकिने अत्याधुनिक हाइड्रोजन बमको विकास गरेको बताएको छ। सरकारी सञ्चार माध्यमले देशका नेता किम जोङ उनले त्यस्तो हतियारको निरिक्षण गरेको जनाएको छ। उक्त बमको तस्बिर भने सार्वजनिक गरिएको छैन्। स्वतन्त्र रुपमा उक्त घोषणाको पुष्टी भएको छैन् तर पश्चिमा देशहरुले ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी उत्तर कोरियाले परमाणूसँग सम्बन्धित उपकरणहरु निर्माण गर्ने प्रविधिसम्म...	Read More
उत्तर कोरियाले फेरि पनि अाणविक परिक्षण गरेकाे छ । अाणविक परिक्षणका कारण काेलियाली प्रायःद्वीपमा भूकम्प मापन गरिएको छ। यसलाई उत्तर कोरियाले आफ्नो छैटौ परमाणु बम परीक्षण गरेको अनुमान गरिएको छ। अमेरिकी भूगर्भ विभागका अनुसार रेक्टरको मापन ६.३ तीब्रताको भूकम्प बराबरको छ । जसको गहिराइ दश किलोमिटर रहेको छ। दक्षिण कोरियाले तत्काल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाएको छ । उत्तर कोरियाको...	Read More
पश्चिम बंगाल प्रहरीले अन्धाधुन्ध गाेली चलाउँदा दार्जिलिङमा यस्ताे बिपत्ती
शनिबार, भदौ १७, २०७४ kantipurlink.com
पश्चिम बंगालअन्तर्गतको दार्जिलिङसहित क्षेत्रमा बेग्लै गोर्खाल्यान्ड राज्य माग गर्दै जारी आन्दोलन क्रममा प्रहरीको गोलीबाट थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ । सावित्री राईसहित १२ पक्राउ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट फर्कंदै गरेका मोर्चाका नेता दावा भुटियाको शुक्रबार तकबरको सिंग्ला प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएको हो । प्रहरीले तीन केन्द्रीय सदस्यसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेको मोर्चाले जनाएको छ । प्रहरीले केन्द्रीय...	Read More
मेकअपका लागि ३ महिनामा राष्ट्रपतिकाे ३० लाख भन्दा बढी खर्च
बुधबार, भदौ १४, २०७४ kantipurlink.com
कुनै राष्ट्पति मेकअपको विषयलाई लिएर विवादमा आउनु अचम्म लाग्न सक्छ तर फ्रान्सका राष्ट्पति यहीँ विषयलाई लिएर नै विवादमा परेका छन् । खबरका अनुसार फ्रान्सको एक म्यागेजिनले देशका राष्ट्पतिद्धारा पछिल्लो ३ महिनामा आफ्नो मेकअपका लागि अत्याधिक खर्च गरेको रिपोर्ट दर्ता गराएका छन् । राष्ट्पति मेक्रोनले ९० दिन अर्थात तीन महिनामा ३० लाख रुपैया भन्दा बढी केबल आफ्नो मेकअपका लागि मात्र खर्च...	Read More
फेसबुकमा शुक्रवार र शनिवार किन अायाे समस्या ?
आइतवार, भदौ ११, २०७४ kantipurlink.com
शुक्रबार र शनिबार विश्वभरका प्रयोगकर्ताहरु अचानक फेसबुक बन्द भएका कारण चिन्तित भएका थिए । शुरुवातमा सेक्युरिटीमा खतराका कारण यस्तो भएको मानिएको थियो तर केही समयमा नै फेसबुकले कुनै सेक्युरिटीको खतरा नभई प्राविधिक त्रुटीका कारण केही समयका लागि मात्र फेसबुक बन्द भएको जानकारी दिएको थियो । यो त्रुटी हालैमा भएको क्लाउडफ्लेएर लीकका कारण भएको भनिएकोमा यस्तो नभएको फेसबुकले जानकारी दियो ।...	Read More
राजदुतलाई नै जब क्रान्तिकारी नेताकाे भूतले सतायाे…
आयरल्याण्डका लागि क्यानडाका राजदुत भूतको विषयलाई लिएर चिन्तित भएका छन् । उनी बसेको ठाउँमा भुतले दुःख दिएको बताएका छन् । राजदुत केविन विकर्सलाई क्यानडाको डबलिनमा आधिकारिक स्थानमा कुनै प्रेत आत्माको छायाँ रहेको हुनसक्ने चिन्ता र डर रहेको बताइरएकाे छ । हालैमा राजदुत विकर्सले फेसबुक पोस्टमा आफूले अचम्म अचम्मको आवाज सुनेको कुरा लेखेका थिए । उनले निवास स्थानको मुख्य हलमा गह्रो...	Read More
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार Leaveacomment
अमेरिका महिलाले जितिन् अहिलेसम्म कै सबैभन्दा ठूलाे चिठ्ठा, कति रकम हाेला ?
एजेन्सी । तपाईलाई सुन्दै अचम्म लाग्ला तर यो सत्य घटना हो । एक अमेरिकी महिलाले अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो धनराशीको पुरस्कार जितेकी छन् । सुन्दै अचम्म लाग्ने उनले नेपाली रुपैयाँ ८० अर्ब चिठ्ठा जितेर संसारकै सबैभन्दा धेरै रकम चिठ्ठामा पाउने महिला बनेकी छन् । बुधबार संयुक्त राज्य अमेरिकाको मासाचुसेट्स राज्यमा भएको यो घोषणाले एकपटक विश्वलाई तरङ्गित बनायो । घोषणासँगै विश्वभर एकजना...	Read More